आकाशमा बिहीबार रातिबाट देखिने छ यस्तो दृश्य , २ दिन उत्कर्ष रुपमा देखिने ! – Hamrosandesh.com
आकाशमा बिहीबार रातिबाट देखिने छ यस्तो दृश्य , २ दिन उत्कर्ष रुपमा देखिने !
बिहीबार रातिबाट उल्का वर्षा सक्रिय हुने भएको छ । उल्का वर्षा आजबाट सक्रिय भए पनि यसको उत्कर्ष रूप भने हामीले वैशाख ९ र १० गते मात्र देख्न सकिनेछ । बिहीबार रातिबाट सुरु हुने यो उल्का वर्षको पहिलो उल्का वर्षा यही महिनाको १८ गतेसम्म सक्रिय रहनेछ । ९ र १० गते राति भने यसको उत्कर्ष रूप देख्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी हुने उल्का वर्षा दृश्यावलोकन गर्ने गरिएको छ । हामीले दृश्यावलोकन गर्न भने ९ र १० गतेको राति ८ः३० बजेको समय उपयुक्त भएको नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले बताएको छ । वैशाख १० पछि यस वर्षको पहिलो उल्का वर्षाको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै जाने र १८ पछि यो पूर्णतः निष्क्रिय हुने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताएका छन् ।
कहिलेकाहीँ राति आकाशमा तारा खसेको देखिन्छ । पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा पुच्छ्रेतारानजिक पुग्दा त्यसको कक्ष वरपर धुलोका कण र चट्टान ठोक्किएर जल्दछन् । खसोलविदहरूका अनुसार, १० पटकभन्दा बढी पटक हुने यस्ता घटनालाई उल्का वर्षा भनिन्छ ।
यसका विभिन्न रूप हुन्छन् । वर्षको पहिलोपटक हुने वर्षाको नाम भने वीणा हो । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष भट्टराईले बिहीबार रातिबाट उल्का वर्षा सक्रिय हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । भट्टराईका अनुसार, यो यस वर्षको पहिलो उल्का वर्षा हो ।